Jaal Daawud Ibsaaf qooda kaayuun dirqama – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooJaal Daawud Ibsaaf qooda kaayuun dirqama
Jaal Daawud Ibsaaf qooda kaayuun dirqama
Jaal Daawud Ibsaaf qooda kaayuun dirqama – (Dawud Ibsa deserves recognition)
Yaya Beshir (aka Boruu Baraaqaa)
Qabsoo Oromoo keessatti qooda koo gumaachuuf muradhee qabsaayota gameeyyii waliin Eertiraan ture. Waggaa 12 ol achitti dabarseera. Gammoojjii dirree leenjii lama sadi irraa qabee hanga Asmaraatti ilaalchi mootummichi qabsoo keenyaaf qabu maal akka fakkaatu qaamaan keessa jiraadhee argeera. Waanin argerraa ka’ee ragaa bahuuf dirqaman qaba. Isaayaas Afawarqii takkaa qabsoo Oromoof fira dhugaa trahee hin beeku. Qabsoo Oromoo ABOn hogganamuu fi mootummaa Eertiraa gidduutti “hariiroon firoomaa” kan eegale 1998 irraa qabeeti. Yeroo kanatti quuqama addaa Oromoof horatan osoo hin taane fira isaanii durii Wayyaaneedhaan wal dhaban. Diinni diina kootii fira kootiidhaan Wayyaanee balleessuuf jecha warra Wayyaanee lolu hundaaf afeerraa godhan. ABOn humnoota afeeraman san keessaa tokko ture. ABO bara 1992tti Wayyaanee waliin irratti shiranii biyyaa baasan bara 1998 keessa ‘nu baraari’ jedhanii itti iyyatan.
Addi Bilisummaa Oromoo humna murteessaa tahuu ni beeku. Humni ABO duuba jiru ummata Oromoo guddicha kan hiree siyaasaa Itoophiyaa murteessu tahuu ni hubatu. Kanaafuu mormitoota Wayyaanee keessaa ABO qabannaan Wayyaanee nu salphifte ni salphifna jedhanii amanani. Dhugaas ture. Qabsoo ABOn godheen Oromoon dammaqee sabboonummaa isaa cimse. Sabboonummaa sanatu Qeerroo dhale. Qeerroon sochii seena qabeessa godhe sanaan Wayyaaneen bakkaa buqqaaate. Kanaafuu ABOn ifaajeen isaa lafatti hin hafne. Kana yoo jennu garuu Wayyaanee buqqise malee Oromoon ammas abbaa aangoo biyya isaa hin taane.
Shaabiyaan qabsoo Oromoof fira dhugaa miti kan jedhuuf sababa waliini. Dura dursoo kaayyoon qabsoo Oromoo fi abjuun warra Shaabiyaa wal faallaa dha. Akeeka hiree murteeffannaa Oromoof diina tarsimoo tahuu isaanii hubanne. Dirqii itti taheeti malee maqaa ‘Oromoo’ jedhu addatti dhagahuu hin fedhani. Nu qabatanii Wayyaanee ofirraa balleessuuf malee qabsoon keenya galii isaa dhaqqabe Oromoon dhugumatti hiree isaa murteeffatee akka abbaa aangoo tahuuf miti. WBOn Eertiraa irraa ka’ee yeroo adda addaatti biyya seenaa tures gariin akkuma biyya seeneen afaan diinaa bu’uu duubaan shirri namoota isaanii akka hin dhabamne wal nama hin gaafachiisu. Mormitoota biyya isaanii turan hunda harka itti naqatanii gara ofii fedhanitti naannessaa bahan. Isaan eenyu faa dha?
1. Arbagnooch fi Ginbot 7- Jarri kun duraan lama turan. Lachuu kaayyoon isaanii Itoophiyaa moofaa jiraachisuu waan taheef fedhii warra Shaabiyaa waliin wal gitu. Akeeka isaanii keessatti yoo itti milkaawaniif walabummaa Ertiraayyuu cabsuu kan jedhu jiraatullee, Shaabiyaaf sun yaaddoo hin turre. Oromoo biyya namaa cabsuu irraa haajaa hin qabne caalaa Arbanyooch fi Gimbot 7 firoomfachaa turani. Garuu firooma sirnaa osoo hin taane hariiroo ajajaa fi ajajamaa qabaachuu turan. Waraanni Arbagnooch qondaalota Shaabiyaatiin hogganama, ajajama, leenjifama. Ajaja jaraatiin ala fincaaniif bahee deebi’uu hin danda’u. Bilisummaa jaarmayummaa hin qabu.
2. Tigray People Democratic Movement (TPDM) – Kun humna jalqaba irratti ilmaan Tigraay Wayyaanee mormitu irraa jaarame tahuyyuu, booda keessa guutummaan guutuutti harka Shaabiyaatti kufe. Warra jaraan buluu dide ni dhabamsiisan. Hogganni isaa gubbaa hanga gadiitti joollee Eertiraa turani. Humni kun humna waraanaa mormituu guddicha biyyattii keessa ture yoo tahu guyyaa tokkollee Wayyaanee lolee mata duree oduu tahee hin beeku. Hojiin isaa guddaan qonnaa dha. Sana irraa kan hafe tika masaraa Asmaraa ti. Shaabiyaan waraana kana dhimma addaaf akka leenjfate hubatamaa ture.
3. ONLF – Jarri kun kaayoonis tahee akka waraanaatti ABO fi WBO waliin hariiroo wayyaa warra qabu. Waraana isaaniis kan leenjisu qondaalota Shaabiyaa qofa osoo hin taane qondaalota WBOtiin leenjifamaa turan. ONLFis yoo tahe partially dhiibbaa Shaabiyaa irraa ala hin turre.
4. Dhaaba Warra Kibbaa – Yeroo gabaabduuf miseensota waraana mootummaa keessaa gananii dhufan walitti qabanii waraana joollee Kibbaa tokko jaaranii turani. Shaabiyaan jara kana ofumaa jaaree ofumaa gara barbaadutti hogganaa ture. Boodarra walitti guuree Arbagnoochitti naqee jaarmaya isaanii dhabama godhe.
ADDATTI ABO – Wanni adda godhu harka naqannaa Shaabiyaa didee ofirraa dhorkuu isaati. Waraanni keenya hanga sadarkaa commando-tti ofiif wal leenjisa malee Shaabiyaan keessa hin seentu. Joolleen Oromoo ofirra dabartee warra akka ONLFiyyuu leenjifti turte. Dhaabas yoo tahe Shaabiyaan akka fedhe harka itti dhahee akka warra kaan godhutti ABO ergachuu hin dandeenye. Dhaabni mormituu Itoophiyaa biyya sana keessatti walabummaa dhaabummaa isaa tikfatee jiraate ABO qofa yoo jenne dogoggoruu hin tahu. Kunis ciminaa fi cichoomina HD dhaabichaa J/Daawud Ibsaatiin akka tahe hubachuu feesisa. Dhugaa dha, bara 2008 keessa rakkoo dhaaba keessatti dhalateen wal qabatee hanqinni tokko tokko ni ture. Shaabiyaan garee lama tolfachuun tokko gama J/ Daawud, kaan ammoo gama J/ Kamaal goruun wal dhabdee ture daranuu hammeessuu keessatti qooda fudhatanii turani. Dhibee sana akka malee kan hammeesseyyuu shoora Shaabiyaati yoo jedhame cubbuu natti hin fakkaatu.
Walumaa galatti Shaabiyaan ABO fi kaayyoo qabsoo isaa salphisuuf hanga dandeesse yaalaa turte. Andaargaachoo Tsiggee miidiyaa isaaniirratti dhiheessanii ABO fi akeeka QBO ifatti arrabsiisaa turan. Oromoo diiguu dandeenya jedhanii miidiyaa mootummichaa irratti dhaadatan. Waldhabdee ABO keessatti dhalate sababfachuun bara 2010 keessa murna tokko qabatanii kaaniin dhahuuf heddu ifaajan. ”Afaan Oromoo afaan hojii Itoophiyaa akka tahu ni deeggarra kan jenneef jara gowwoomsuuf malee dhugaan itti amannee miti” jechuun waan Andaargachoon dubbate EriTV fi Dimts Haffash irratti dhiheessuun daranuu mormitoota biyyattii wal nyaachisuuf hojjechaa turan. Dhimmi olola akkasii sun akka sirraahuu qabu ABOn gaafatee fudhachuu didan. Andargaachoon hidhamnaan gaafa Biraanuu Naggaa Asmaraa seenu isa qabatanii qorqalbii ABO rukutuuf waan hin godhin hin qabani. Biraanuu Naggaa miidiyaalee Shaabiyaa hundatti bahee waan qabsoo Oromoo yakkuu fi diinomfachuu irratti akka bobba’u godhame. Masaraa Isaayaas mana godhatee ABO biyyuma sana keessaa waajjira qabu abaaraa ture. Kun waanuma Shaabiyaan tahe jedhee godhe malee coincidence hin turre.
Dhugaa dha, Shaabiyaan akkuma mormituu Wayyaanee kamiifuu godhe ABOf qubsuma kennee bara dheeraaf gargaarsa logistics fi finance godheera. Ummanni Eertiraas qabsoo fi qabsaayota Oromoof fira malee diina hin turre. Turtii bara dheeraa biyya sana turameef galata dhabuun hin tahu. Mootummaan Eertiraa turtii waggaa 20 keessatti mormitootaaf horii guddaa baaseera. Kaayyoon isaa maaluu haa tahuu maaluu, galateeffachuudhumatu mala. Akkasuu tahee ABOn waan garii galii deeggartoota isaa irraa ala kanaa argatuun of danda’ee cufachaa ture. Fakkeenyaaf humna guddaa ABO tokko kan tahe Birkiin SBO kiraa manaa fi studio mataa isaa mana keessatti jaarrachuu irraa eegalee guutummaa guutuutti baasii mataa ofiitiin of utubee socho’aa ture. Dameeleen dhaabaa gariinis akkasuma.
Kana hunda wantin yaadadheef daaw’annaa Isaayaas yeroo koronaa kanatti seera cabsee dhimma belbeltuuf Shaggar dhufeen wal qabsiiseeni. Siyaasaa keessatti firris tahee diinni dhaabbataan hin jiruun dhugaa dha. Kaleessa OPDO fi Shaabiyaan waluu hin beekanu. OPDOn akka humna siyaasaatti lakkaawamtee maqaa Shaabiyaatiinuu hin dhahamtu ture. Har’a qabsoon Oromoo Wayyaanee buqqiseefii jennaan maqaa Oromootiin bakka Wayyaanee kan buute OPDO fi ilmaan Nafxanyaa Shaabiyaatti firoomanii qabsoo Oromoo irratti shira xaxaa jiraachuutu dubbii keessa dabarres nu yaadachiise. Qabsoon Oromoo kaleessas har’as qabsoo ofirratti hirkannooti. Dantaa yeroo argachuuf jecha namaaf sagaduun amala hogganoota qabsichaa akka hin tahin seenaa keenyatu ragaa baha. Kalleessayyuu lafa namaa keessa taa’ee of hin salphifne. Har’a ammoo hoggantoonni isaa hunduu galaana keessaa dhalatan ummata isaanii gidduutti argamu. Kan kaleessaa daran hundee bal’ifachaa fi guyyuma guyyaan diina Oromoo irratti wal ijaartu ofirraa baqsaa deemu malee akka diinni hawwutti baqanii hin badani!